Windows 7 Fanohanana nesorina tao amin'ny BootCamp ho an'ny New Mac Pro | Avy amin'ny mac aho
Apple dia nanala ny fanohanana ho an'ny Windows 7 ao amin'ny BootCamp Assistant ho an'ny Mac Pro vaovao
Na dia tsy ny Windows 7 aza no farany amin'ny resaka rafitra miasa, izaho farafaharatsiny Mbola heveriko ho lohahevitra tanteraka io ary ny fahafantarana bebe kokoa ny fandraisana 'mangatsiaka' ananan'ny Windows 8 sy ny kinova 8.1 taty afovoan'ny mpampiasa. Ny tena tsy azoko tsara dia ity fihetsiky ny Apple ity hisintona ny fanohanana ny Windows 7 ao amin'ny mpanampy BootCamp ho an'ny Mac Pro vaovao.
Araka ny filazan'ny vondrona mpamorona tsy miankina ao amin'ny Mac miaraka amin'ny anaram-bosotra Twocanoes, fantatra fa tao an-tsain'i Apple ny hisintona an'io fanohanana io ary ankehitriny dia ao anatin'ny antontan-taratasy mifamatotra amin'ny mpanampy BootCamp ho an'ny Mac Pro dia hita fa nariana ny fahafaha-mametraka Windows 7 amin'ny Mac Pro vaovao.
Amin'ity toe-javatra ity dia hisy matihanina samihafa hoterena afindrao amin'ny Windows 8 ny rafitrao, virtualize amin'ny alàlan'ny programa toa ny Parallels, ny kinova Windows 7 na misafidy mivantana tsy maintsy misafidy Mac hafa momba an'io. Etsy ankilany, ny interface Windows 8 dia mifantoka mazava tsara amin'ny efijery mikasika ny ampahany lehibe amin'ny rafitra natao ho an'ity tanjona ity, izay nahatonga orinasa sy mpampiasa maro karazana nandà ity kinova ity araka ny nolazaiko anao teo aloha.
Ity adidy hametraka Windows 8 na kinova manaraka ity dia tsy azoko tsara ary bebe kokoa amin'ny solosaina toa ny Mac Pro izay tsy tafiditra. tsy misy efijery mikasika amin'ny tenany, toy ny hoe ny iMac ho avy ohatra na ny rafitra azo entina manana izany fahaiza-manao izany no mahavita azy.
Na izany aza, Apple dia nampiavaka ny fijanonana hanohana aloha be amin'ny rafitra Microsoft, farafaharatsiny ao amin'ireo kinova taloha. Tsiahivina fa rehefa nivoaka ny taranaka faharoa an'ny MacBook Air, dia tsy notohanana tao amin'ny BootCamp ho an'ny solosaina rehetra intsony i Windows XP sy Vista.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Bootcamp » Apple dia nanala ny fanohanana ho an'ny Windows 7 ao amin'ny BootCamp Assistant ho an'ny Mac Pro vaovao
Fetsy hikarakarana rakitra be dia be ao amin'ny HandBrake